ch 11 တမန်တော်ဝတ္ထု – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / တမန်တော်၏တမန်တော် / ch 11 တမန်တော်ဝတ္ထု
11:2 ထိုအခါ, when Peter had gone up to Jerusalem, those who were of the circumcision argued against him,
11:3 ဟုဆို, “Why did you enter to uncircumcised men, and why did you eat with them?"
11:4 And Peter began to explain to them, တစ်ခုစနစ်တကျထုံးစံ၌, ဟုဆို:
11:5 “I was in the city of Joppa praying, နှင့်ငါမြင်, in an ecstasy of mind,avision:acertain container descending, likeagreat linen sheet being let down from heaven by its four corners. And it drew near to me.
11:6 And looking into it, I considered and saw the four-footed beasts of the earth, နှင့်တောသားရဲ, and the reptiles, and the flying things of the air.
11:7 Then I also heardavoice saying to me: '' ထလော့, ပတေရုသ. Kill and eat.’
11:8 ဒါပေမယ့်ငါကလည်း: '' ဘယ်တော့မှမ, အရှင်သည်! For what is common or unclean has never entered into my mouth.’
11:11 ထိုအခါ, immediately there were three men standing near the house where I was, having been sent to me from Caesarea.
11:12 Then the Spirit told me that I should go with them, အဘယ်အရာကိုမျှသံသယ. And these six brothers went with me also. And we entered into the house of the man.
11:15 And when I had begun to speak, the Holy Spirit fell upon them, just as upon us also, အစအဦးအတွက်.
11:16 Then I remembered the words of the Lord, just as he himself said: ‘John, တကယ်ပါပဲ, ရေ၌ဗတ္တိဇံ, but you shall be baptized with the Holy Spirit.’
11:17 ထို့ကြောင့်, if God gave them the same grace, as also to us, who have believed in the Lord Jesus Christ, who was I, that I would be able to prohibit God?"
11:18 Having heard these things, they were silent. And they glorified God, ဟုဆို: “So has God also given to the Gentiles repentance unto life.”
11:28 ထိုအခါသူတို့ကိုတ်, named Agabus, မြင့်တက်တက်, signified through the Spirit that there was going to beagreat famine over the entire world, which did happen under Claudius.
12:1 အခုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာ, ရှငျဘုရငျကိုဟေရုဒ်သည်မိမိလက်ကိုတိုးချဲ့, အသင်းတော်အနေဖြင့်အချို့သောနှောင့်ရှက်နိုင်ရန်အတွက်.
12:2 ထိုနောက်ယာကုပ်ဦးသေဆုံး, ယောဟန်၏အစ်ကို, ထားဘေးနှင့်အတူ.
12:3 ထိုသို့ယုဒလူတို့နှစ်သက်ကြောင်းကိုမြင်လျှင်, ပေတရုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လာမယ့်အထဲက set. အခုတော့ဇုလကျထကျခဲ့သည်.
12:4 ဒီတော့သူကသူ့ကိုဖမ်းမိပြီးမှ, သူသည်ထောင်ထဲသို့စေလွှတ်တော်မူ, လေးစစ်သားလေးယောက်အုပ်စုများ၏ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသို့ကိုယျတျောကိုကျော်လိုက်တာနဲ့, ပသခါအပြီးလူကသူ့ကိုထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်.
12:5 ဒါပတေရုသထောင်ထဲမှာထိန်းသိမ်းခံခဲ့သည်. သို့သော်ပဌနာခြားခြင်းမရှိဘဲလုပ်ခံရ, အသင်းတော်အားဖြင့်, မိမိအကိုယ်စားဘုရားသခင်အား.
12:6 ဟေရုဒ်မင်းသူ့ကိုထုတ်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသောအခါ, ထိုနေ့ညဉ့်၌, ပတေရုသနှစ်ခုစစ်သားများအကြားအိပ်ပျော်, နှစ်ယောက်သံကြိုးနှင့်ချည်နှောင်ခညျြနှောငျခဲ့သညျ. ထိုအခါတံခါးရှေ့တွင်အစောင့်ရှိကြ၏, အကျဉ်းထောင်စောင့်.
12:7 ထိုအခါ, သခင်ဘုရား၏တစ်ခုအိန်ဂျယ်အနီးတွင်ရပ်နေကြ၏, နှင့်တစ်ဦးအလင်းဆဲလ်အတွင်းကရောင်ခြည်ထွန်း. ထိုအခါဘက်မှာပတေရုသနှိပ်, သူ့ကိုနိုး, ဟုဆို, "ထလော့, လျင်မြန်စွာ။ "ထိုသံကြိုးကသူ့လက်မှကျဆင်း.
12:8 ထိုအခါအိန်ဂျယ်ကလညျး: "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝတ်စားဆင်ယင်, နှင့်။ သင့်ရဲ့ဘွတ်ဖိနပ်ပေါ်တွင်တင် "ထိုအခါသူကပြု. သူသညျအထံတော်ကပြောပါတယ်, "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်ပတ်သည်သင်၏အဝတ်ကိုထုပ်ငါ့ကိုလိုက်နာပါ။ "
12:9 ထိုအထွက်, သူသညျလိုကျ. ထိုအမှန်တရားမသိခဲ့ပါ: ဒီတစ်ခုအိန်ဂျယ်ပြုခံရခဲ့. သူသည်မိမိသည်ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုမြင်လျှင်ခဲ့သည်ထင်.
12:10 ထိုအခါပထမနှင့်ဒုတိယအစောင့်များကဖြတ်သန်း, သူတို့ကမြို့တော်သို့ပို့ဆောင်ပေးသောသံတံခါးဆီသို့ရောက် လာ. ,; ထိုသို့သူ့ဟာသူသူတို့အဘို့အဖွင့်လှစ်. နှင့်ထွက်ခွာ, သူတို့တစ်တွေအခြို့သောအခြမ်းလမ်းတစ်လျှောက်တွင်ပေါ်ဆက်လက်. နှင့်ရုတ်တရက်အိန်ဂျယ်သူ့ထံမှနုတ်ထွက်.
12:11 ထိုအခါပေတရု, သူ့ကိုယ်သူပြန်, ကပြောပါတယ်: "အခုဆိုရင်ငါသိ, အမှန်တကယ်, ထာဝရဘုရားသည်မိမိအိန်ဂျယ်စေလွှတ်တော်မူသော, နှင့်သောသူသည်ဟေရုဒ်မင်း၏လက်မှနှင့်ယုဒလူတို့၏ထားချက်အရခဲ့ကြသည်သောသူအပေါင်းတို့အထဲကငါ့ကိုကယ်လွှတ်တော်မူ၏။ "
12:13 ထိုအခါ, as he knocked at the door of the gate,agirl went out to answer, whose name was Rhoda.
12:14 And when she recognized the voice of Peter, out of joy, she did not open the gate, ဒါပေမဲ့မယ့်အစား, running in, she reported that Peter stood before the gate.
12:17 But motioning to them with his hand to be silent, he explained how the Lord had led him away from prison. နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, “Inform James and those brothers.” And going out, he went away to another place.
12:18 ထိုအခါ, when daylight came, there was no small commotion among the soldiers, as to what had happened concerning Peter.
12:20 Now he was angry with those of Tyre and Sidon. But they came to him with one accord, နှင့်, having persuaded Blastus, who was over the bedchamber of the king, they petitioned for peace, because their regions were supplied with food by him.
12:21 ထိုအခါ, on the appointed day, Herod was clothed in kingly apparel, and he sat in the judgment seat, and he gaveaspeech to them.
12:23 ထိုခဏ, an Angel of the Lord struck him down, because he had not given honor to God. And having been consumed by worms, he expired.
13:1 အခုတော့ရှိခဲ့သည်, in the Church at Antioch, prophets and teachers, among whom were Barnabas, ရှိမုန်, who was called the Black, and Lucius of Cyrene, and Manahen, who was the foster brother of Herod the tetrarch, and Saul.
13:3 ထိုအခါ, fasting and praying and imposing their hands upon them, they sent them away.
13:9 ထိုအခါရှောလုသညျ, who is also called Paul, having been filled with the Holy Spirit, looked intently at him,
13:10 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: “So full of every deceit and of all falsehoods, son of the devil, enemy of all justice, you never cease to subvert the righteous ways of the Lord!
13:11 နှင့်ယခု, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, the hand of the Lord is upon you. And you will be blinded, not seeing the sun foralength of time.” And immediatelyafog andadarkness fell over him. And wandering around, he was seeking someone who might lead him by the hand.
13:14 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, သူတို့, traveling on from Perga, arrived at Antioch in Pisidia. And upon entering the synagogue on the Sabbath day, they sat down.
13:15 ထိုအခါ, after the reading from the Law and the Prophets, the leaders of the synagogue sent to them, ဟုဆို: "Noble ကညီအစ်ကိုတွေ, if there is in you any word of exhortation to the people, speak.”
13:16 ထိုအခါပေါလုသည်, ထမိမိလက်နှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေဘို့အမှတ်ပေးလျက်, ကပြောပါတယ်: ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူသည် "ဣသရေလလူနှင့်သင်, အနီးကပ် listen.
13:17 ဣသရေလလူတို့သည်၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်, နှင့်လူမျိုးကိုချီးမြှောက်, သူတို့သည်အဲဂုတ္တုပွညျ၌အခြေချခဲ့ကြသည့်အခါ. ကာခြီးမွှောကျလက်မောင်းနှင့်အတူ, သူဝေးထိုအရပ်မှ၎င်းသူတို့ကိုလမ်းပြတော်မူ၏.
13:20 after about four hundred and fifty years. ထိုနောက်မှ, he gave them judges, even until the prophet Samuel.
13:21 And later on, they petitioned foraking. And God gave them Saul, ကိရှ၏သား,aman from the tribe of Benjamin, အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံး.
13:22 သူ့ကိုဖယ်ရှားဘဲလျက်, သူကသူတို့ကိုရှငျဘုရငျသညျဒါဝိဒျအဘို့ပေါ်ထွန်းစေ. သူ့ကိုအကြောင်းကိုသက်သေခံချက်ကမ်းလှမ်း, ဟုသူကပြောသည်, '' ဒါဝိဒ်ကိုငါတွေ့ပြီ, ယေရှဲ၏သား, ငါ့ကိုယ်ပိုင်နှလုံးသည်နှင့်အညီလူယောက်ျားဖြစ်, သူငါအားလုံးပြီးမြောက်ပါလိမ့်မယ်။ ''
13:23 သူ၏အမျိုးအနွယ်ထံမှ, ဂတိတော်အတိုင်း, ဘုရားသခငျသညျဣသရလေသညျယရှေုကယ်တင်ရှင်ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ.
13:24 ယောဟနျသညျဟောပွောခွငျးခံခဲ့ရ, မိမိအထွန်း၏မျက်နှာကိုမတိုင်မီ, ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်လူတွေအားနောင်တနှင့်တစ်ဦးဗတ္တိဇံ.
13:25 ထိုအခါ, ယောဟန်သည်မိမိသင်တန်းပြီးစီးသည့်အခါ, သူကပြောနေခဲ့သည်: '' ငါသည်သင်တို့ငါ့ကိုဖြစ်စဉ်းစားပါတမဟုတ်. ကှ္ဂျကှ္ဂျများအတွက်, တဦးတည်းငါ့နောက်မှရောက်ရှိ, အဘယ်သူ၏ခွကေိုငါလျှော့ပေးရေးဖို့မထိုက်မတန်ဖြစ်ကြောင်းကို၏ဖိနပ်။ '
13:30 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, God raised him up from the dead on the third day.
13:34 အခုတော့, since he raised him from the dead, so as to no longer return to corruption, he has said this: ‘I will give to you the holy things of David, the faithful one.’
13:35 And also then, in another place, သူကပြောပါတယ်: ‘You will not allow your Holy One to see corruption.’
13:36 ဒါဝိဒ်သည်, when he had ministered to his generation in accordance with the will of God, fell asleep, and he was placed next to his fathers, and he saw corruption.
13:37 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, he whom God has raised from the dead has not seen corruption.
13:38 ထို့ကြောင့်, သင်သိပါစေ, noble brothers, that through him is announced to you remission from sins and from everything by which you were not able to be justified in the law of Moses.
13:39 သူ့ကိုအတွက်, all who believe are justified.
13:40 ထို့ကြောင့်, be careful, lest what was said by the Prophets may overwhelm you:
13:42 ထိုအခါ, as they were departing, they asked them if, on the following Sabbath, they might speak these words to them.
13:43 And when the synagogue had been dismissed, many among the Jews and the new worshipers were following Paul and Barnabas. ထိုသူတို့က, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God.
13:44 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, on the following Sabbath, nearly the entire city came together to hear the Word of God.
13:45 ထိုအခါယုဒလူတို့, လူအစုအဝေးကိုမြင်လျှင်, were filled with envy, သူတို့, ဘုရားကိုလွန်ကျူး, contradicted the things that were being said by Paul.
13:46 Then Paul and Barnabas said firmly: “It was necessary to speak the Word of God first to you. But because you reject it, and so judge yourselves unworthy of eternal life, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, we turn to the Gentiles.
13:48 Then the Gentiles, ဒီအနားမကြားအပေါ်သို့, were gladdened, and they were glorifying the Word of the Lord. And as many as believed were preordained to eternal life.
13:51 ဒါပေမယ့်သူတို့, shaking the dust from their feet against them, went on to Iconium.
14:2 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, the Jews who were unbelieving had incited and enflamed the souls of the Gentiles against the brothers.
14:3 ဆိုတော့, they remained foralong time, acting faithfully in the Lord, offering testimony to the Word of his grace, providing signs and wonders done by their hands.
14:4 Then the multitude of the city was divided. သေချာပေါက်, some were with the Jews, yet truly others were with the Apostles.
14:6 သူတို့, ဒီသဘောပေါက်, fled together to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and to the entire surrounding region. And they were evangelizing in that place.
14:10 But when the crowds had seen what Paul had done, they lifted up their voice in the Lycaonian language, ဟုဆို, “The gods, having taken the likenesses of men, have descended to us!"
14:12 လည်း, the priest of Jupiter, who was outside the city, in front of the gate, bringing in oxen and garlands, was willing to offer sacrifice with the people.
14:13 And as soon as the Apostles, Barnabas and Paul, ထိုစကားကိုကြားခဲ့, tearing their tunics, they leapt into the crowd, အော်ဟစ်
14:14 ဟု: “Men, why would you do this? We also are mortals, men like yourselves, preaching to you to be converted, from these vain things, to the living God, who made heaven and earth and the sea and all that is in them.
14:19 But as the disciples were standing around him, he got up and entered the city. ထိုအခါနက်ဖြန်နေ့၌, he set out with Barnabas for Derbe.
15:1 အချို့သူမြားကို, ယုဒပြည်မှဆင်း သက်., ညီအစျကိုဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့ကြသည်, "သင်တို့သည်မောရှေ၏ထုံးစံအတိုငျးအရေဖျားလှီးလျှင်, သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ "
15:2 ထို့ကြောင့်, ပေါလုနှင့်ဗာနဗသည်သူတို့တဘက်၌အဘယ်သူမျှမသေးငယ်တဲ့လူထုအုံကြွမှုကိုဖန်ဆင်းသည့်အခါ, သူတို့သညျပေါလုနှင့်ဗာနဗဆုံးဖြတ်, တစ်ဖက်စီကနေတချို့, ဤမေးခွန်းကို အကြောင်းပြု. ယေရုရှလင်မြို့၌တမန်တော်တို့နှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်တက်သွားသင့်တယ်.
15:3 ထို့ကြောင့်, အဆိုပါဘုရားကျောင်းကဦးဆောင်လျက်ရှိ, သူတို့ဖိနိတျပွညျနှင့်ရှမာရိမှတဆင့်ခရီးထွက်, တပါးအမျိုးသားတို့ပြောင်းလဲခြင်းဖော်ပြ. ထိုသူတို့ကညီအစ်ကိုအပေါင်းတို့အကြားအလွန်ဝမ်းမြောက်စေ.
15:4 ထိုသူတို့ကယေရုရှလင်မြို့၌ရောက်ရှိသောအခါ, သူတို့ကခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနှင့်တမန်တော်တို့နှင့်အကွီးအကဲမြားအားဖြင့်လက်ခံရရှိခဲ့သည်, ကြီးသောအမှုတို့ကိုဘုရားသခင့သူတို့နှင့်အတူပြုသမျှဘယ်အရာကိုသတင်းပို့.
15:5 ဖာရိရှဲတို့၏ဂိုဏ်းထံမှဒါပေမဲ့တချို့, ယုံကြည်သူများဖြစ်နှင့်သောသူတို့, ဟုသည်ထ, "သူတို့အရေဖျားလှီးခြင်းကိုရန်နှင့်မောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်ညွှန်ကြားခံရဖို့အတှကျဒါဟာလိုအပ်ပေသည်။ "
15:7 And afteragreat contention had taken place, Peter rose up and said to them: "Noble ကညီအစ်ကိုတွေ, you know that, in recent days, God has chosen from among us, by my mouth, Gentiles to hear the word of the Gospel and to believe.
15:10 သို့ဖြစ်., why do you tempt God to imposeayoke upon the necks of the disciples, which neither our fathers nor we have been able to bear?
15:13 And after they had been silent, James responded by saying: "Noble ကညီအစ်ကိုတွေ, listen to me.
15:15 And the words of the Prophets are in agreement with this, ဒါကြောင့်ရေးသားခဲ့သကဲ့သို့:
15:16 ‘After these things, ငါပြန်လာမယ်, and I will rebuild the tabernacle of David, which has fallen down. And I will rebuild its ruins, and I will raise it up,
15:17 so that the rest of men may seek the Lord, along with all the nations over whom my name has been invoked, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ, who does these things.’
15:19 ဒီအတွက်ကြောင့်, I judge that those who were converted to God from among the Gentiles are not to be disturbed,
15:22 Then it pleased the Apostles and elders, with the whole Church, to choose men from among them, and to send to Antioch, with Paul and Barnabas, ယုဒ, who was surnamed Barsabbas, and Silas, preeminent men among the brothers,
15:23 what was written by their own hands: “The Apostles and elders, ကိုညီအစျ, to those who are at Antioch and Syria and Cilicia, brothers from the Gentiles, နှုတ်ခွန်းဆက်စကား.
15:27 ထို့ကြောင့်, we have sent Judas and Silas, who themselves also will, with the spoken word, reaffirm to you the same things.
15:30 ဆိုတော့, having been dismissed, they went down to Antioch. And gathering the multitude together, they delivered the epistle.
15:33 ထိုအခါ, after spending some more time there, they were dismissed with peace, by the brothers, to those who had sent them.
15:36 ထိုအခါ, after some days, Paul said to Barnabas, “Let us return to visit the brothers throughout all the cities in which we have preached the Word of the Lord, to see how they are.”
15:40 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, ရှင်ပေါလု, choosing Silas, ထွက်မသတ်မှတ်, being delivered by the brothers to the grace of God.
16:1 Then he arrived at Derbe and Lystra. ထိုအခါ,acertain disciple named Timothy was there, the son ofafaithful Jewish woman, his fatheraGentile.
16:5 သေချာပေါက်, the Churches were being strengthened in faith and were increasing in number every day.
16:6 ထိုအခါ, while crossing through Phrygia and the region of Galatia, they were prevented by the Holy Spirit from speaking the Word in Asia.
16:8 ထိုအခါ, when they had crossed through Mysia, they descended to Troas.
16:9 Andavision in the night was revealed to Paul ofacertain man of Macedonia, standing and pleading with him, ဟု: “Cross into Macedonia and help us!"
16:10 ထိုအခါ, after he saw the vision, immediately we sought to set out for Macedonia, having been assured that God had called us to evangelize to them.
16:13 ထိုအခါ, on the Sabbath day, we were walking outside the gate, besideariver, where there seemed to beaprayer gathering. နှင့်ထိုင်, we were speaking with the women who had assembled.
16:14 ထိုအခါမိနျးမတယော, named Lydia,aseller of purple in the city of Thyatira,aworshiper of God, listened. And the Lord opened her heart to be receptive to what Paul was saying.
16:15 And when she had been baptized, with her household, she pleaded with us, ဟုဆို: “If you have judged me to be faithful to the Lord, enter into my house and lodge there.” And she convinced us.
16:16 ထိုအခါကြောင့်ဖြစ်ပျက်, as we were going out to prayer,acertain girl, havingaspirit of divination, met with us. She wasasource of great profit to her masters, through her divining.
16:17 This girl, following Paul and us, was crying out, ဟုဆို: “These men are servants of the Most High God! They are announcing to you the way of salvation!"
16:20 And presenting them to the magistrates, သူတို့ကဆိုပါတယ်: “These men are disturbing our city, since they are Jews.
16:25 ထိုအခါ, in the middle of the night, Paul and Silas were praying and praising God. And those who were also in custody were listening to them.
16:26 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, there wasasudden earthquake, so great that the foundations of the prison were moved. And immediately all the doors were opened, and the bindings of everyone were released.
16:28 But Paul cried out withaloud voice, ဟုဆို: “Do no harm to yourself, for we are all here!"
16:29 Then calling foralight, သူဝငျကွ. And trembling, he fell before the feet of Paul and Silas.
16:30 And bringing them outside, ဟုသူကပြောသည်, “Sirs, what must I do, so that I may be saved?"
16:33 ထိုမင်းသည်, taking them in the same hour of the night, washed their scourges. And he was baptized, and next his entire household.
16:35 မိုဃ်းလင်းသောအခါအရောက်လာပြီး, the magistrates sent the attendants, ဟုဆို, “Release those men.”
16:36 But the prison guard reported these words to Paul: “The magistrates have sent to have you released. သို့ဖြစ်., ထွက်သွား. Go in peace.”
16:37 But Paul said to them: “They have beaten us publicly, though we were not condemned. They have cast men who are Romans into prison. And now they would drive us away secretly? Not so. အဲဒီအစား, let them come forward,
16:38 and let us drive them away.” Then the attendants reported these words to the magistrates. And upon hearing that they were Romans, ကြောက်လန့်.
17:2 ထိုအခါပေါလုသည်, ထုံးစံအတိုငျး, entered to them. And for three Sabbaths he disputed with them about the Scriptures,
17:6 And when they had not found them, they dragged Jason and certain brothers to the rulers of the city, အော်ဟစ်: “For these are the ones who have stirred up the city. And they came here,
17:8 And they incited the people. And the rulers of the city, ဤအမှုအရာတို့ကိုကြားနာအပေါ်သို့,
17:10 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, the brothers promptly sent Paul and Silas away by night to Beroea. And when they had arrived, they entered the synagogue of the Jews.
17:12 ထိုအအမှန်ပင်, many believed among them, as well as notafew among the honorable Gentile men and women.
17:13 ထိုအခါ, when the Jews of Thessalonica had realized that the Word of God was also preached by Paul at Beroea, they went there also, stirring up and disturbing the multitude.
17:15 Then those who were leading Paul brought him as far as Athens. And having received an order from him to Silas and Timothy, that they should come to him quickly, သူတို့အထဲက set.
17:17 ဆိုတော့, he was disputing with the Jews in the synagogue, and with the worshipers, and in public places, နေ့ရက်တိုင်းတစ်လျှောက်လုံး, with whomever was there.
17:19 သူ့ကို apprehending, they brought him to the Areopagus, ဟုဆို: “Are we able to know what this new doctrine is, about which you speak?
17:22 But Paul, standing in the middle of the Areopagus, ကပြောပါတယ်: “Men of Athens, I perceive that in all things you are rather superstitious.
17:23 For as I was passing by and noticing your idols, I also found an altar, on which was written: TO THE UNKNOWN GOD. ထို့ကြောင့်, what you worship in ignorance, this is what I am preaching to you:
17:29 ထို့ကြောင့်, since we are of the family of God, we must not consider gold or silver or precious stones, or the engravings of art and of the imagination of man, to bearepresentation of what is Divine.
17:30 ထိုအအမှန်ပင်, ဘုရားသခ, having looked down to see the ignorance of these times, has now announced to men that everyone everywhere should do penance.
17:32 And when they had heard about the Resurrection of the dead, တကယ်ပါပဲ, some were derisive, while others said, “We will listen to you about this again.”
17:34 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, certain men, adhering to him, did believe. Among these were also Dionysius the Areopagite, andawoman named Damaris, and others with them.
18:1 ဤအရာတို့ကိုပြီးနောက်, having departed from Athens, he arrived at Corinth.
18:6 But since they were contradicting him and blaspheming, he shook out his garments and said to them: “Your blood is on your own heads. I am clean. အခုမှစပြီး, I will go to the Gentiles.”
18:9 Then the Lord said to Paul, throughavision in the night: "မကြောက်ပါနဲ့. အဲဒီအစား, speak out and do not be silent.
18:10 ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူဖြစ်၏. And no one will take hold of you, so as to do you harm. For many of the people in this city are with me.”
18:13 ဟုဆို, “He persuades men to worship God contrary to the law.”
18:14 ထိုအခါ, when Paul was beginning to open his mouth, Gallio said to the Jews: “If this were some matter of injustice, orawicked deed, O noble Jews, I would support you, as is proper.
18:17 ဒါပေမယ့်သူတို့, apprehending Sosthenes,aleader of the synagogue, beat him in front of the tribunal. And Gallio showed no concern for these things.
18:18 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, ရှင်ပေါလု, after he had remained for many more days, having said goodbye to the brothers, sailed into Syria, and with him were Priscilla and Aquila. Now he had shaved his head in Cenchreae, for he had madeavow.
18:19 And he arrived at Ephesus, and he left them behind there. သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, သူကသူ့ကိုယ်သူ, entering into the synagogue, was disputing with the Jews.
18:20 ထိုအခါ, although they were asking him to remain foralonger time, he would not agree.
18:21 အဲဒီအစား, saying goodbye and telling them, “I will return to you again, God willing,” he set out from Ephesus.
18:23 And having spent some length of time there, သူထွက်မသတ်မှတ်, and he walked in order through the region of Galatia and Phrygia, strengthening all the disciples.
18:24 Nowacertain Jew named Apollo, born at Alexandria, an eloquent man who was powerful with the Scriptures, ဧဖက်မြို့၌ရောက်ရှိ.
18:26 ဆိုတော့, he began to act faithfully in the synagogue. And when Priscilla and Aquila had heard him, they took him aside and expounded the Way of the Lord to him more thoroughly.
18:27 ထိုအခါ, since he wanted to go to Achaia, the brothers wrote an exhortation to the disciples, so that they might accept him. ထိုမင်းသည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမှ, he held many discussions with those who had believed.
19:1 အခုတော့ကြောင့်ဖြစ်ပျက်, Apollo ကောရိနသုမှာနေစဉ်, ရှင်ပေါလု, သူကအထက်ပိုင်းဒေသများအားဖြင့်ခရီးသွားပြီးမှ, ဧဖက်မြို့၌ရောက်ရှိ. ထိုမင်းသည်အခြို့သောတပည့်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်.
19:2 ထိုသူတို့အားဆို၏, "ယုံကြည်ပြီးနောက်, သင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ခံရကြပြီ?"ဒါပေမဲ့သူတို့ကလညျး, "ကျနော်တို့ကတောင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရှိကွောငျးမကြားပြီ။ "
19:3 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, ဟုသူကပြောသည်, "ထိုအခါသင်သည်ဗတ္တိဇံကိုခံကြပြီအဘယျသို့နှင့်အတူ?"ထိုသူတို့ကဆိုပါတယ်, "ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံနှင့်အတူ။ "
19:4 ထိုအခါပေါလုဟုဆိုသည်: "ယောဟနျနောငျတ၏ဗတ္တိဇံတရားတွေနဲ့လူဗတ္တိဇံကို, သူ့နောက်မှာလာသူတစ်ဦးကယုံကြည်သင့်ကြောင်းဟုဆို, ကြောင်း, ယေရှု၌။ "
19:5 ဤအရာတို့ကိုကြားနာအပေါ်သို့, သူတို့သခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ရသည်.
19:6 ထိုအခါပေါလုသည်သူတို့အပျေါမှာမိမိလက်ကိုချမှတ်ပြီးမှ, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်သူတို့ကိုကူးလာကြသည်. ထိုသူတို့ဘာသာစကားပြောခြင်းနှင့်ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်.
19:8 ထိုအခါ, တရားစရပ်ထဲသို့ဝင်ခြင်းတို့အပေါ်မှာ, သူသုံးလအဘို့ကိုသစ္စာရှိရှိစကားပြောခဲ့, ငြင်းခုံခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့အကြောင်းသူတို့ကိုဆွဲဆောင်.
19:9 But when certain ones became hardened and would not believe, cursing the Way of the Lord in the presence of the multitude, ရှင်ပေါလု, withdrawing from them, separated the disciples, disputing daily inacertain school of Tyrannus.
19:13 ထိုအခါ, even some of the traveling Jewish exorcists had attempted to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, ဟုဆို, “I bind you by oath through Jesus, whom Paul preaches.”
19:17 ဆိုတော့, this became known to all the Jews and Gentiles who were living at Ephesus. Andafear fell over them all. And the name of the Lord Jesus was magnified.
19:20 ဒီလိုမျိုး, the Word of God was increasing strongly and was being confirmed.
19:21 ထိုအခါ, when these things were completed, Paul decided in the Spirit, after crossing through Macedonia and Achaia, ယေရုရှလင်မြို့သို့မသွား, ဟုဆို, “Then, after I have been there, it is necessary for me to see Rome also.”
19:23 အခုတော့အဲဒီအခြိနျမှာ, there occurred no small disturbance concerning the Way of the Lord.
19:25 And calling them together, with those who were employed in the same way, ဟုသူကပြောသည်: “Men, you know that our income is from this craft.
19:26 And you are seeing and hearing that this man Paul, by persuasion, has turned awayagreat multitude, not only from Ephesus, but from nearly all of Asia, ဟုဆို, ‘These things are not gods which have been made by hands.’
19:27 ထို့ကြောင့်, not only is this, our occupation, in danger of being brought into repudiation, but also the temple of the great Diana will be reputed as nothing! Then even her majesty, whom all of Asia and the world worships, will begin to be destroyed.”
19:28 Upon hearing this, they were filled with anger, and they cried out, ဟုဆို, “Great is Diana of the Ephesians!"
19:30 ထိုအခါ, when Paul wanted to enter to the people, the disciples would not permit him.
19:35 And when the scribe had calmed the crowds, ဟုသူကပြောသည်: “Men of Ephesus, now what man is there who does not know that the city of the Ephesians is in the service of the great Diana and of the offspring of Jupiter?
19:36 ထို့ကြောင့်, since these things are not able to be contradicted, it is necessary for you to be calm and to do nothing rash.
20:1 ထိုအခါ, after the tumult ceased, ရှင်ပေါလု, calling the disciples to himself and exhorting them, said farewell. ထိုမင်းသည်အထဲက set, so that he might go into Macedonia.
20:6 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, we sailed from Philippi, after the days of Unleavened Bread, and in five days we went to them at Troas, where we stayed for seven days.
20:7 ထိုအခါ, on the first Sabbath, when we had assembled together to break bread, Paul discoursed with them, intending to set out the next day. But he prolonged his sermon into the middle of the night.
20:9 Andacertain adolescent named Eutychus, sitting on the window sill, was being weighed down byaheavy drowsiness (for Paul was preaching at length). ထိုအခါ, as he went to sleep, he fell from the third floor room downward. And when he was lifted up, he was dead.
20:10 When Paul had gone down to him, he laid himself over him and, embracing him, ကပြောပါတယ်, “Do not worry, for his soul is still within him.”
20:11 ဆိုတော့, တက်မယ့်, and breaking bread, and eating, and having spoken well on until daylight, he then set out.
20:15 And sailing from there, အောက်ပါနေ့၌, we arrived opposite Chios. And next we landed at Samos. And on the following day we went to Miletus.
20:17 ထိုအခါ, မိမှဧဖက်မြို့သို့စေလွှတ်ခြင်း, သူသည်အသင်းတော်၌ဖွားမြင်သဖြင့် သာ. ကြီးမြတ်သူတို့အားခေါ်တော်.
20:18 ထိုသူတို့သညျအထံတော်သို့ လာ. , အတူတူခဲ့ကြပြီးမှ, သူတို့ပြောဆို: "သင်ပထမဦးဆုံးသောနေ့ ရက်မှစ. ငါအာရှသို့ဝငျသညျ့အခါသင်တို့သိရ, ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိနေသော, တစ်ခုလုံးကိုအချိန်များအတွက်, ဒီနည်းလမ်းအတွက်:
20:19 သခင်ဘုရား၏အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ကို, အားလုံးနှိမျ့ခခြွငျးနှငျ့ယုဒအမျိုး၏ပုန်ကန်မှုမှငါ့ကိုအကွုံတှေ့ရသောမျက်ရည်နှင့်စမ်းသပ်မှုတွေနေသော်လည်း,
20:20 အဘယ်သို့ငါတန်ဖိုးခဲ့ကြောင်းဘာမျှမပြန်ကျင်းပ, ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းငါသည်သင်တို့အားတရားကိုဟောပြောဘူး, ငါလူသိရှင်ကြားနှင့်အိမ်များတလျှောက်လုံးသင်ဆုံးမသွန်သင်ကြပြီ,
20:22 နှင့်ယခု, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, ၌စိတ်ဝိညာဉ်အားတာဝန်ရှိခံရ, ငါသည်ယေရုရှလင်သွားပါ၏, ထိုအရပ်၌ငါ့အားအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုမသိ,
20:23 သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကလွဲပြီး, ခပ်သိမ်းသောမြို့တလျှောက်လုံး, ငါ့ကိုသတိပေးခဲ့သည်, သံကြိုးနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းယေရုရှလင်မြို့၌ငါ့ကိုဆိုင်းလင့်သည်ဟုဆို.
20:24 သို့သော်လည်းငါသည်ဤအရာတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှကြောက်. ဒါကြောင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်သောကွောငျ့ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုပိုပြီးအဖိုးတန်ဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့မရှိ, အချို့သောလမ်းအတွက်ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းကိုဖြည့်စွက်နိုင်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်၏ဓမ်မအမှုကြောင်းကိုထောက်ပံ့, သောငါသည်ထာဝရဘုရားသညျယရှေုထံမှလက်ခံရရှိ, ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုသက်သေခံဖို့.
20:25 နှင့်ယခု, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, ငါသည်သင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမကြာကြာငါ့မျက်နှာကိုမမြင်ရကြဟုငါသိ၏, ငါခရီးထွက်ခဲ့ကြတော်မူသောလူတို့တွင်သင်တို့ရှိသမျှကို, ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုဟောပွောခွငျး.
20:26 ဒီအတွက်ကြောင့်, ငါသည်ဤသည်အလွန်နေ့၌မျက်မြင်သက်သေများအဖြစ်သင်တို့ကိုခေါ်: ငါသည်ခပ်သိမ်းသော၏အသွေးမှစင်ကြယ်သောဖြစ်ကြောင်းကို.
20:28 ကိုယ်အဘို့ကိုယ်နှင့်တစ်ခုလုံးကိုသိုးစုကိုဂရုစိုက်ပါ, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မူသောဘုရားသခင်၏အသင်းတော်အုပ်ချုပ်ဖို့တျောကွီးမြားသကဲ့သို့သင်တို့တပ်စွဲထားပြီးကျော်, သောမိမိအသွေးအားဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်.
20:29 ငါသည်ငါ့ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ရဲဝံပုလွေသငျတို့တှငျရိုက်ထည့်လိမ့်မည်ဟုသိ, သိုးစုကိုကြဲသည်မဟုတ်.
20:30 ထိုအခါသင်တို့သည်ကိုယ်ကိုသင်တို့အထဲမှနှင်ထုတ်, လူတို့သညျထမညျ, သူတို့နောက်တပည့်သွေးဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ကောက်သောအမှုအရာစကားပြော.
20:31 ဒီအတွက်ကြောင့်, နိုးနိုးကြားကြားဖြစ်, မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာဆက်ထိန်းထားသုံးနှစ်တစ်လျှောက်လုံးကိုငါငြိမ်းမ, နေ့ညဉ့်, မျက်ရည်နှင့်အတူ, အသီးအသီးအသီးအသငျသညျတစျခုဆုံး.
20:32 နှင့်ယခု, ငါသည်ဘုရားသခင်နှင့်သူ၏ကျေးဇူးတရား၏စကားတျောကိုသငျသညျခြီးမှမျး. သူကဆောတနျခိုးရှိပါတယ်, နှင့်သန့်ရှင်းသောသူအပေါင်းတို့အားတစ်ဦးအမွေကိုပေးစေခြင်းငှါ.
20:33 ငါရွှေငွေမဟုတ်အဂွဲရိုးပြီ, မဟုတ်အဝတ်,
20:34 သငျသညျကိုယ်တိုင်သိအဖြစ်. သည်ငါ့အားဖြင့်ငါနှင့်အတူနေသောသူတို့ကိုအားဖြင့်လိုအပ်ခဲ့သည့်, ဤလက်တို့သည်ပေးထားပြီ.
20:35 ငါသည်သင်တို့အားခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပြပါပြီ, ဒီလမ်းအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ရှိသောကြောင့်, အားနည်းကူညီပံ့ပိုးရန်နှင့်သခင်ယေရှု၏စကားတော်ကိုအောက်မေ့ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, ဘယ်လိုသူကပြောပါတယ်, '' ဒါဟာခံယူဖို့ထက်ပေးရ သာ. မင်္ဂလာဖြစ်ပါသည်။ ' "
20:36 ထိုမင်းသည်ဤအရာတို့ကိုပြောကြားခဲ့သည်ပြီးမှ, ချဒူးထောက်, သူထိုသူအပေါင်းတို့နှင့်တကွဆုတောင်းလေ၏.
20:37 ထိုအခါအလွန်ကြီးစွာသောငိုကြွေးမြည်သူတို့အားလုံးကိုအကြားဖြစ်ပွား. နှင့်, ပေါလု၏လည်ပင်းကိုအပေါ်သို့ကျသွား, သူတို့ကသူ့ကိုနမ်း,
20:38 ဟုသူကပြောသည်ခဲ့သောစကားလုံးကျော်အပေါင်းတို့၏အများဆုံးဝမျးနညျးခံရ, သူတို့သည်နောက်တဖန်မိမိမကျြနှာကိုမမြင်ရမယ်လို့. ထိုသူတို့ကသင်္ဘောထံသို့ဆောင်ခဲ့.
21:3 ထိုအခါ, after we had caught sight of Cyprus, keeping it to the left, we sailed on to Syria, and we arrived at Tyre. For the ship was going to unload its cargo there.
21:4 ထိုအခါ, having found the disciples, we lodged there for seven days. And they were saying to Paul, through the Spirit, that he should not go up to Jerusalem.
21:5 And when the days were completed, အထဲက setting, we went on; and they all accompanied us with their wives and children, until we were outside of the city. And we kneeled down at the shore and prayed.
21:7 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, having completed our journey by boat from Tyre, we descended to Ptolemais. And greeting the brothers, we lodged with them for one day.
21:8 ထိုအခါ, after setting out the next day, we arrived at Caesarea. And upon entering into the house of Philip the evangelist, who was one of the seven, we stayed with him.
21:10 And while we were delayed for some days,acertain prophet from Judea, named Agabus, ရောက်ရှိ.
21:11 ထိုမင်းသည်, when he had come to us, took Paul’s belt, and binding his own feet and hands, ဟုသူကပြောသည်: “Thus says the Holy Spirit: The man whose belt this is, the Jews will bind in this way at Jerusalem. And they will deliver him into the hands of the Gentiles.”
21:14 And since we were not able to persuade him, we quieted, ဟုဆို: “May the will of the Lord be done.”
21:15 ထိုအခါ, ထိုကာလပြီးနောက်, having made preparations, we ascended to Jerusalem.
21:18 ထိုအခါ, အောက်ပါနေ့၌, Paul entered with us to James. And all the elders were assembled.
21:20 ထိုသူတို့က, upon hearing it, magnified God and said to him: “You understand, အစ်ကို, how many thousands there are among the Jews who have believed, and they are all zealous for the law.
21:22 လာမယ့်ဆိုတာဘာလဲ? The multitude ought to be convened. For they will hear that you have arrived.
21:23 ထို့ကြောင့်, do this thing that we ask of you: We have four men, who are underavow.
21:25 ဒါပေမယ့်, about those Gentiles who have believed, we have writtenajudgment that they should keep themselves from what has been immolated to idols, and from blood, and from what has been suffocated, and from fornication.”
21:26 ထိုအခါပေါလုသည်, taking the men on the next day, was purified with them, and he entered the temple, announcing the process of the days of purification, until an oblation would be offered on behalf of each one of them.
21:27 But when the seven days were reaching completion, those Jews who were from Asia, when they had seen him in the temple, incited all the people, and they laid hands on him, အော်ဟစ်:
21:28 “Men of Israel, help! This is the man who is teaching, everyone, everywhere, against the people and the law and this place. ထို့အပွငျ, he has even brought Gentiles into the temple, and he has violated this holy place.”
21:31 ထိုအခါ, as they were seeking to kill him, it was reported to the tribune of the cohort: “All Jerusalem is in confusion.”
21:32 ဆိုတော့, immediately taking soldiers and centurions, he rushed down to them. And when they had seen the tribune and the soldiers, they ceased to strike Paul.
21:33 Then the tribune, အနီး drawing, apprehended him and ordered that he be bound with two chains. And he was asking who he was and what he had done.
21:36 For the multitude of the people were following and crying out, "သူ့ကိုပယ်ရှားလျှင်!"
21:37 And as Paul was beginning to be brought into the fortress, he said to the tribune, “Is it permissible for me to say something to you?"ထိုအခါသူကပြောသည်, “You know Greek?
21:38 သို့ဖြစ်., are you not that Egyptian who before these days incitedarebellion and led out into the desert four thousand murderous men?"
21:40 And when he had given him permission, ရှင်ပေါလု, standing on the stairs, motioned with his hand to the people. And whenagreat silence occurred, he spoke to them in the Hebrew language, ဟုဆို:
22:3 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: “I amaJewish man, born at Tarsus in Cilicia, but raised in this city beside the feet of Gamaliel, taught according to the truth of the law of the fathers, zealous for the law, just as all of you also are to this day.
22:4 I persecuted this Way, သေခံသည်တိုင်အောင်, binding and delivering into custody both men and women,
22:6 သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်ပျက်, as I was traveling and was approaching Damascus at midday, suddenly from heavenagreat light shone around me.
22:7 And falling to the ground, I heardavoice saying to me, ‘Saul, ရှောလုသည်, why are you persecuting me?''
22:8 And I responded, ‘Who are you, သခင်ဘုရားသည်?’ And he said to me, ‘I am Jesus the Nazarene, whom you are persecuting.’
22:9 And those who were with me, တကယ်ပါပဲ, saw the light, but they did not hear the voice of him who was speaking with me.
22:10 ထိုအခါငါကပြောသည်, 'ကျွန်တော်ဘာလုပ်သင့်သလဲ, သခင်ဘုရားသည်?’ Then the Lord said to me: '' ထလော့, and go to Damascus. ထိုအရပ်၌, you shall be told all that you must do.’
22:13 drawing near to me and standing close by, ငါ့အားပြောဆို၏, ‘Brother Saul, ကြည့်ရှု!’ And in that same hour, I looked upon him.
22:14 သို့သော်သူကပြောသည်: ‘The God of our fathers has preordained you, so that you would come to know his will and would see the Just One, and would hear the voice from his mouth.
22:16 နှင့်ယခု, why do you delay? ထလော့, and be baptized, နှင့်သင့်အပြစ်များကိုဆေးကြော, by invoking his name.’
22:17 ထိုအခါကြောင့်ဖြစ်ပျက်, when I returned to Jerusalem and was praying in the temple,amental stupor came over me,
22:19 ထိုအခါငါကပြောသည်: 'သခင်, they know that I am beating and enclosing in prison, throughout every synagogue, those who have believed in you.
22:21 ထိုမင်းသည်ငါ့အားပြောဆို၏, ‘Go forth. For I am sending you to far away nations.’ ”
22:22 Now they were listening to him, until this word, and then they lifted up their voice, ဟုဆို: “Take this kind away from the earth! For it is not fitting for him to live!"
22:26 Upon hearing this, the centurion went to the tribune and reported it to him, ဟုဆို: “What do you intend to do? For this man isaRoman citizen.”
22:27 And the tribune, ချဉ်းကပ်, သူ့ကိုကပြောပါတယ်: "ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ. Are youaRoman?"ဒီတော့သူကပြောသည်, "ဟုတ်တယ်။ "
22:29 ထို့ကြောင့်, those who were going to torture him, immediately withdrew from him. The tribune was similarly afraid, after he realized that he wasaRoman citizen, for he had bound him.
22:30 သို့သော်နက်ဖြန်နေ့၌, ပိုပြီးစေ့စေ့အကြောင်းရင်းသူယုဒလူတို့သဖြင့်စွပ်စွဲခဲ့ကွောငျးဘာရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လို, သူ့ကိုပြန်လွှတ်, သူကကျင်းပရမည်မှယဇ်ပုရောဟိတ်အမိန့်, တစ်ခုလုံးကိုကောင်စီနှင့်အတူ. နှင့်, ပေါလုကထုတ်လုပ်, သူသူတို့တွင်သူ့ကိုတပ်စွဲ.
23:1 ထိုအခါပေါလုသည်, gazing intently at the council, ကပြောပါတယ်, "Noble ကညီအစ်ကိုတွေ, I have spoken with all good conscience before God, even to this present day.”
23:2 ထိုအခါယဇ်ပုရောဟိတ်, Ananias, instructed those who were standing nearby to strike him on the mouth.
23:3 Then Paul said to him: “God shall strike you, you whitewashed wall! For would you sit and judge me according to the law, ဘယ်တော့လဲ, contrary to the law, you order me to be struck?"
23:5 And Paul said: “I did not know, ကိုညီအစျ, that he is the high priest. ကျမ်းစာလာသည်ကား: ‘You shall not speak evil of the leader of your people.’ ”
23:6 အခုတော့ရှင်ပေါလု, တစျအုပျစုဇဒ္ဒုကဲများနှင့်အခြားခဲ့ကြသည်ဖာရိရှဲတို့ဖြစ်ကြောင်း သိ., ထိုကောင်စီထဲမှာကွှေးကျွောခဲ့: "Noble ကညီအစ်ကိုတွေ, ငါသည်တဖာရိရှဲဖွစျပါ၏, ဖာရိရှဲတို့၏သား! ဒါဟာငါစစ်ကြောစီရင်ခံရသူဖြစ်ကြောင်းကိုသေလွန်သောသူတို့သည်၏မြော်လင့်ခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ "
23:7 ထိုအခါသူသည်ဤကပြောသည်ပြီးမှ, တစ်စိတျဝမျးကှဲဖာရိရှဲနှင့်ဇဒ္ဒုကဲအကြားဖြစ်ပွား. ထိုအခါလူအစုအဝေးကိုခှဲဝေခဲ့သည်.
23:8 ဇဒ္ဒုကဲအဘို့အထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိကြောင်းဆိုကြသည်, မကောငျးကငျတမနျ, မဟုတ်ဝိညာဉ်ကို. သို့သော်ထိုဖာရိရှဲတို့သည်ဤနှစ်မျိုးလုံးကိုဝန်ခံ.
23:9 ထိုအခါအလွန်ကြီးစွာသောဆူညံရှိဖြစ်ပွားခဲ့သည်. ဖာရိရှဲများနှင့်အချို့သော, မြင့်တက်တက်, တိုက်ပွဲခဲ့ကြသည်, ဟုဆို: "ကျနော်တို့ကဒီလူကိုဘေးဥပဒ်အလျှင်းမရှာပါ. စိတျဓာတျအထံတျောပြောပြီမူလျှင်အဘယျသို့, သို့မဟုတ်တစ်ဦးကောင်းကင်တမန်?"
23:10 ကြီးစွာသောခြင်းများကတည်းကလုပ်ခဲ့, အ Tribune, ပေါလုသည်ထိုသူတို့အားဖြင့်ခွဲကိုက်ခံရအံ့သောငှါအားကွောကျရှံ့, ဆင်းရန်နှင့်၎င်းတို့၏အထဲကသူ့ကိုဘမ်းဆီးခြင်းငှါစစ်သူရဲအမိန့်, နှင့်ခံတပ်သို့ကိုယျတျောကိုရောက်စေဖို့.
23:11 ထိုအခါ, အောက်ပါညဉ့်တွင်, သခင်ဘုရားသည်သူ့ကိုအနီးရပ်ကပြောပါတယ်: "စဉ်ဆက်မပြတ် Be. သငျသညျယေရုရှလင်မြို့၌ငါ့အကွောငျးသက်သေခံကြပါပြီနည်းတူများအတွက်, သငျသညျရောမမြို့မှာသက်သေခံရန်အဘို့အထိုနည်းတူကြောင့်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ "
23:14 And they approached the leaders of the priests, နှင့်အသက်ကြီးသူတို့, ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်: “We have sworn ourselves by an oath, so that we will taste nothing, until we have killed Paul.
23:15 ထို့ကြောင့်, with the council, you should now give notice to the tribune, so that he may bring him to you, as if you intended to determine something else about him. But before he approaches, we have made preparations to put him to death.”
23:17 And Paul, calling to him one of the centurions, ကပြောပါတယ်: “Lead this young man to the tribune. For he has something to tell him.”
23:18 ထိုအအမှန်ပင်, he took him and led him to the tribune, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, “Paul, the prisoner, asked me to lead this young man to you, since he has something to say to you.”
23:19 Then the tribune, လက်တော်ဖြင့်သူ့ကိုယူပြီး, withdrew with him by themselves, and he asked him: “What is it that you have to tell me?"
23:20 ထိုအခါသူကပြောသည်: “The Jews have met to ask you to bring Paul tomorrow to the council, as if they intended to question him about something else.
23:21 သို့သော်အမှန်တကယ်, you should not believe them, for they would ambush him with more than forty men from among them, who have bound themselves by an oath neither to eat, nor to drink, until they have put him to death. And they are now prepared, hoping for an affirmation from you.”
23:23 ထိုအခါ, having called two centurions, သူတို့ပြောဆို: “Prepare two hundred soldiers, so that they may go as far as Caesarea, and seventy horsemen, and two hundred spearmen, for the third hour of the night.
23:25 သူကကြောက်ဘို့, lest perhaps the Jews might seize him and kill him, and that afterwards he would be falsely accused, as if he had acceptedabribe. And so he wrotealetter containing the following:
23:26 “Claudius Lysias, to the most excellent governor, Felix: နှုတ်ခွန်းဆက်စကား.
23:29 And I discovered him to be accused about questions of their law. သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, nothing deserving of death or imprisonment was within the accusation.
23:32 ထိုအခါနက်ဖြန်နေ့၌, sending the horsemen to go with him, they returned to the fortress.
23:34 And when he had read it and had asked which province he was from, realizing that he was from Cilicia, ဟုသူကပြောသည်:
24:1 ထိုအခါ, after five days, the high priest Ananias came down with some of the elders andacertain Tertullus,aspeaker. And they went to the governor against Paul.
24:2 And having summoned Paul, Tertullus began to accuse him, ဟုဆို: “Most excellent Felix, since we have much peace through you, and many things may be corrected by your providence,
24:4 But lest I speak at too greatalength, တောင်းပန်ပါတယ်, by your clemency, to listen to us briefly.
24:7 သို့သော်လုသိ, အ Tribune, overwhelming us with great violence, snatched him away from our hands,
24:10 ထိုအခါ, since the governor had motioned for him to speak, Paul responded: “Knowing that you have been the judge over this nation for many years, I will give an explanation of myself with an honest soul.
24:11 အကြောင်းမူကား,, as you may realize, it has only been twelve days since I went up to worship in Jerusalem.
24:17 ထိုအခါ, after many years, I went to my nation, bringing alms and offerings and vows,
24:22 Then Felix, after having ascertained much knowledge about this Way, kept them waiting, ဟု, “When Lysias the tribune has arrived, I will give youahearing.”
24:24 ထိုအခါ, after some days, Felix, arriving with his wife Drusilla who wasaJew, called for Paul and listened to him about the faith that is in Christ Jesus.
24:25 And after he discoursed about justice and chastity, and about the future judgment, Felix was trembling, and he responded: “For now, သွား, but remain under guard. ထိုအခါ, at an opportune time, I will summon you.”
24:26 He was also hoping that money might be given to him by Paul, ကွောငျ့ဤအမှု, he frequently summoned him and spoke with him.
24:27 ထိုအခါ, when two years had passed, Felix was succeeded by Portius Festus. And since Felix wanted to show particular favor to the Jews, he left Paul behind asaprisoner.
25:1 ဆိုတော့, when Festus had arrived in the province, သုံးရက်အကြာမှာ, he ascended to Jerusalem from Caesarea.
25:2 ထိုအခါယဇ်ပုရောဟိတ်၏ခေါင်းဆောင်များ, and those first among the Jews, went to him against Paul. And they were petitioning him,
25:5 "ထို့ကြောင့်,"ဟုသူကဆိုသည်, “let those among you who are able, descend at the same time, and if there is any guilt in the man, they may accuse him.”
25:6 ထိုအခါ, having stayed among them no more than eight or ten days, he descended to Caesarea. And on the next day, he sat in the judgment seat, and he ordered Paul to be led in.
25:12 Then Festus, having spoken with the council, တုန့်ပြန်: “You have appealed to Caesar, to Caesar you shall go.”
25:13 ထိုအခါအချို့နေ့ရက်လွန်ပြီးမှ, ရှငျဘုရငျကိုအဂရိပ်ပနှင့်ဗရေနိကဲသရိဆင်းသက်တော်, ဖတ်ေတုမငျးနှုတ်ဆက်ဖို့.
25:14 ထိုသူတို့သညျမြားစှာသောနေ့ရက်ကာလအဘို့ထိုအရပ်၌ကျန်ရစ်ကတည်းက, ဖတ်ေတုမငျးကပေါလုအကြောင်းကိုမင်းကြီးအားမိန့်တော်မူ, ဟုဆို: "တစ်ဦးကလူတယောက်ဖေလဇ်မင်းအားဖြင့်တစ်ဦးအကျဉ်းသားအဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်.
25:15 ငါသည်ယေရုရှလင်မှာတုနျးက, ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်ယုဒလူတို့၏အကွီးအကဲမြား၏ခေါင်းဆောင်များကသူ့ကိုအကြောင်းငါ့ဆီသို့ရောက် လာ., သူ့ကိုဆန့်ကျင်ရှုံ့ချတောင်း.
25:16 ငါကတစုံတယောက်သောသူသည်အရှုံးခံဖို့ရောမထုံးစံမကသောသူတို့အားပြန်ပြော, စွပ်စွဲခံသောသူသည်ထိုသူ့အစှပျစှဲခွငျးအားဖွငျ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုယ်သူခုခံကာကွယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုလက်ခံရရှိထားပြီးရှေ့တော်၌, စွဲချက်၏မိမိကိုမိမိရှင်းလင်းသကဲ့သို့.
25:17 ထို့ကြောင့်, သူတို့ကဒီမှာရောက်ရှိပြီးမှ, မည်သည့်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ, အောက်ပါနေ့၌, တရားပလ္လင်၌ထိုင်, ငါသည်လူကိုဆောင်ခဲ့ခံရဖို့အမိန့်ထုတ်.
25:18 သို့သော်စှပျစှဲထပြီးမှ, ငါသည်သူတို့မဆိုးသောသံသယမယ်လို့ရာမှသူ့ကို ပတ်သက်. မည်သည့်စွပ်စွဲချက်တင်ပြဘဲ.
25:19 အဲဒီအစား, သူတို့ကသူ့ကိုဆန့်ကျင်သူတို့ကိုယ်ပိုင်အယူသီးအကြောင်းကိုနှင့်တစ်ဦးအခြို့သောယေရှုအကြောင်းအချို့သောအငြင်းပွားမှုများကိုဆောင်ခဲ့, အဘယ်သူသည်အသေခံခဲ့သည်, ဒါပေမဲ့ပေါလုကိုအသကျရှငျဖွစျဖို့အခိုင်အမာဘယ်သူကို.
25:20 ထို့ကြောင့်, မေးခွန်းဒီလိုမျိုးအကြောင်းသံသယဖြစ်ခြင်း, ငါသူဆန္ဒရှိခဲ့လျှင်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားသူ့ကိုမေးလျှင်ဤအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. စီရငျခွငျးကိုခံရဖို့.
25:21 သို့သော်ပေါလုကဩဂုတ်ရှေ့တော်၌ဆုံးဖြတ်ချက်ဘို့စောင့်စေခြင်းမှဆွဲဆောင်ခဲ့ကတည်းက, ငါစောင့်စေခြင်းငှာသူ့ကိုအမိန့်, ငါကဲသာဘုရငျဖို့သူ့ကိုပေးပို့စေခြင်းငှါ, အထိပါပဲ။ "
25:22 Then Agrippa said to Festus: “I myself also want to hear the man.” “Tomorrow,"ဟုသူကဆိုသည်, “you shall hear him.”
25:25 အမှန်ဆိုသည်ကား,, I have discovered nothing brought forth against him that is worthy of death. But since he himself has appealed to Augustus, it was my judgment to send him.
25:26 But I have not determined what to write to the emperor about him. ဒီအတွက်ကြောင့်, I have brought him before you all, and especially before you, O king Agrippa, သောကြောင့်, once an inquiry has occurred, I may have something to write.
26:1 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, Agrippa said to Paul, “It is permitted for you to speak for yourself.” Then Paul, မိမိလက်ကိုသက်တမ်းတိုးရေး, began to offer his defense.
26:3 especially since you know everything that pertains to the Jews, both customs and questions. ဒီအတွက်ကြောင့်, I beg you to listen to me patiently.
26:4 သေချာပေါက်, all the Jews know about my life from my youth, which had its beginning among my own people in Jerusalem.
26:6 နှင့်ယခု, it is in the hope of the Promise which was made by God to our fathers that I stand subject to judgment.
26:7 It is the Promise that our twelve tribes, worshiping night and day, hope to see. About this hope, အိုမင်းကြီး, I am accused by the Jews.
26:9 သေချာပေါက်, I myself formerly considered that I ought to act in many ways which are contrary to the name of Jesus the Nazarene.
26:10 This is also how I acted at Jerusalem. ဆိုတော့, I enclosed many holy persons in prison, having received authority from the leaders of the priests. And when they were to be killed, I brought the sentence.
26:12 ထို့နောကျ, as I was going to Damascus, with authority and permission from the high priest,
26:13 at midday, အိုမင်းကြီး, I and those who were also with me, saw along the wayalight from heaven shining around me withasplendor greater than that of the sun.
26:14 And when we had all fallen down to the ground, I heardavoice speaking to me in the Hebrew language: ‘Saul, ရှောလုသည်, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goad.’
26:15 ထိုအခါငါကဆိုပါတယ်, ‘Who are you, သခင်ဘုရားသည်?’ And the Lord said, ‘I am Jesus, whom you are persecuting.
26:20 But I preached, first to those who are at Damascus and at Jerusalem, and then to the entire region of Judea, နှင့်တပါးအမျိုးသားတို့အဖို့, so that they would repent and convert to God, doing the works that are worthy of repentance.
26:22 But having been aided by the help of God, ပင်ယနေ့တိုင်အောင်, I stand witnessing to the small and the great, saying nothing beyond what the Prophets and Moses have said would be in the future:
26:31 And when they had withdrawn, they were speaking among themselves, ဟုဆို, “This man has done nothing worthy of death, nor of imprisonment.”
27:9 ထိုအခါ, after much time had passed, and since sailing would no longer be prudent because the Fast Day had now passed, Paul consoled them,
27:10 သူကထိုသူတို့အားပြောဆို: “Men, I perceive that the voyage is now in danger of injury and much damage, not only to the cargo and the ship, but also to our own lives.”
27:16 ထိုအခါ, being forced alongacertain island, which is called the Tail, we were barely able to hold on to the ship’s lifeboat.
27:18 ထိုအခါ, since we were being tossed about strongly by the tempest, အောက်ပါနေ့၌, they threw the heavy items overboard.
27:19 ထိုအခါသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌, with their own hands, they threw the equipment of the ship overboard.
27:20 ထိုအခါ, when neither sun nor stars appeared for many days, and no end to the storm was imminent, all hope for our safety was now taken away.
27:21 And after they had fasted foralong time, ရှင်ပေါလု, သူတို့ရဲ့အလယ်၌ရပ်နေ, ကပြောပါတယ်: "စင်စစ်, ယောက်ျား, you should have listened to me and not set out from Crete, so as to cause this injury and loss.
27:22 နှင့်ယခု, let me persuade you to be courageous in soul. For there shall be no loss of life among you, but only of the ship.
27:24 ဟုဆို: ‘Do not be afraid, ရှင်ပေါလု! It is necessary for you to stand before Caesar. ထိုအခါ, God has given to you all those who are sailing with you.’
27:25 ဒီအတွက်ကြောင့်, ယောက်ျား, be courageous in soul. For I trust God that this will happen in the same way that it has been told to me.
27:27 ထိုအခါ, after the fourteenth night arrived, as we were navigating in the sea of Adria, about the middle of the night, the sailors believed that they saw some portion of the land.
27:29 ထိုအခါ, fearing that we might happen upon rough places, they cast four anchors out of the stern, and they were hoping for daylight to arrive soon.
27:30 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, the sailors were seekingaway to flee from the ship, for they had loweredalifeboat into the sea, on the pretext that they were attempting to cast anchors from the bow of the ship.
27:33 And when it began to be light, Paul requested that they all take food, ဟုဆို: “This is the fourteenth day that you have been waiting and continuing to fast, taking nothing.
27:34 ဒီအတွက်ကြောင့်, I beg you to accept food for the sake of your health. For notahair from the head of any of you shall perish.”
27:35 ထိုမင်းသည်ဤအရာတို့ကိုပြောကြားခဲ့သည်ပြီးမှ, taking bread, he gave thanks to God in the sight of them all. And when he had broken it, he began to eat.
27:37 အမှန်ဆိုသည်ကား,, we were two hundred and seventy-six souls on the ship.
27:39 And when day had arrived, they did not recognize the landscape. သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, they caught sight ofacertain narrow inlet havingashore, into which they thought it might be possible to force the ship.
27:40 And when they had taken up the anchors, they committed themselves to the sea, at the same time loosing the restraints of the rudders. ဆိုတော့, raising the mainsail to the gusting wind, they pressed on toward the shore.
27:41 And when we happened uponaplace open to two seas, they ran the ship aground. ထိုအအမှန်ပင်, the bow, being immobilized, remained fixed, but truly the stern was broken by the violence of the sea.
28:1 And after we had escaped, we then realized that the island was called Malta. သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, the natives offered us no small amount of humane treatment.
28:4 အမှန်တကယ်, when the natives saw the beast hanging from his hand, they were saying to one another: "စင်စစ်, this man must beamurderer, for though he escaped from the sea, vengeance will not permit him to live.”
28:7 Now among these places were estates owned by the ruler of the island, named Publius. ထိုမင်းသည်, taking us in, showed us kind hospitality for three days.
28:11 ဆိုတော့, သုံးလအကြာ, we sailed inaship from Alexandria, whose name was ‘the Castors,’ and which had wintered at the island.
28:13 ထိုအရပ်မှ, sailing close to the shore, we arrived at Rhegium. And after one day, with the south wind blowing, we arrived on the second day at Puteoli.
28:14 အဲဒီမှာ, after locating the brothers, we were asked to remain with them for seven days. And then we went on to Rome.
28:15 ထိုအရပ်၌, when the brothers had heard of us, they went to meet us as far as the Forum of Appius and the Three Taverns. And when Paul had seen them, giving thanks to God, he took courage.
28:16 ငါတို့သည်ရောမမြို့မှာရောက်ရှိသောအခါ, ရှင်ပေါလုသည်ကိုယ်တော်တိုင်အားဖြင့်နေဖို့ခွင့်ပြုချက်ပေးထားခဲ့သည်, သူ့ကိုစောင့်မယ့်စစ်သားနှင့်အတူ.
28:17 ထိုအခါသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌အပြီး, သူသည်ယုဒအမျိုး၏ခေါင်းဆောင်များစုဝေး. ထိုသူတို့ကခေါ်ယူခဲ့သည့်အခါ, သူတို့ပြောဆို: "Noble ကညီအစ်ကိုတွေ, ငါလူတို့တဘက်၌ဘာမျှမပွုပါပွီ, မဘိုးဘေးများ၏အကောက်ခွန်ဆန့်ကျင်, သေးငါရောမတို့လက်သို့ယေရုရှလင်မြို့မှအကျဉ်းသားတစ်ဦးအဖြစ်အပျတျောမူခဲ့သညျ.
28:18 ထိုသူတို့ကငါ့ကိုအကြောင်းကြားနာကျင်းပပြီးနောက်, သူတို့သညျငါ့ကိုဖြန့်ချိခဲ့ကြလိမ့်မယ်, ငါ့ကိုဆန့်ကျင်သည်သေခြင်းမရှိသောအမှုရှိခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.
28:19 သို့သော်ယုဒလူတို့နှင့်ငါ့ကိုဆန့်ကျင်စကားပြော, ငါကဲသာဘုရငျမှအယူခံသတ်ခဲ့သည်, ငါသည်ငါ၏လူမျိုးဆန့်ကျင်စွပ်စွဲချက်မဆိုကြင်နာခဲ့လျှင်ကြောင့်မဟုတ်ခဲ့သော်လည်း.
28:20 ဆိုတော့, ဒီအတွက်ကြောင့်, ငါသည်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ရန်နှင့်သင့်အားစကားပြောဆိုရန်မေတ္တာရပ်ခံ. ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါသညျဤသံကွိုးနှငျ့ဝန်းရံသူဖြစ်ကြောင်းကိုဣသရေလအမျိုး၏မြော်လင့်ခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်၏။ "
28:21 ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူ့ကိုအားဆို၏: “We have not received letters about you from Judea, nor have any of the other new arrivals among the brothers reported or spoken anything evil against you.
28:25 And when they could not agree among themselves, သူတို့သည်ထွက်သွား, while Paul was speaking this one word: “How well did the Holy Spirit speak to our fathers through the prophet Isaiah,
28:26 ဟုဆို: ‘Go to this people and say to them: Hearing, you shall hear and not understand, နှင့်ကိုမြင်လျှင်, you shall see and not perceive.
28:28 ထို့ကြောင့်, သင်သိပါစေ, that this salvation of God has been sent to the Gentiles, and they shall listen to it.”
28:29 ထိုမင်းသည်ဤအရာတို့ကိုပြောကြားခဲ့သည်ပြီးမှ, the Jews went away from him, though they still had many questions among themselves.
28:30 ထိုအခါမိမိငှားစရာများအတွက်နှစျနှစျပတျလုံးအဘို့ကျန်ကြွင်း. ထိုမင်းသည်အထံတော်သို့ ဝင်. သောသူအပေါင်းတို့ကိုလက်ခံရရှိ,
28:31 ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့တရားကိုဟောနှင့်သခင်ယေရှုခရစ်ဖြစ်ကြောင်းစသောအရာဆုံးမဩဝါဒပေး, အားလုံးသစ္စာတော်နှင့်အတူ, တားမြစ်ချက်မပါဘဲ.